Taliska Booliska oo soo bandhigay rag dhac ka geystay magaalada Muqdisho oo hubeysan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliska booliska Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in howlgallo burcad sifeyn ah oo ay ciidanka booliska ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka Gobolka Banaadir lagu soo qabtay rag gacanta kula jiray falal burcad badeednimo ah, kuwaasi oo dhac u geysanayay shacabka Muqdisho.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in howlgallo amni xaqiijin ah oo ay ciidanka booliska ka sameeyeen xaafado ka mid ah degmooyinka Gobolka Banaadir lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo ilaa iyo lix dhallinyaro ah oo ku eedeysan falal dhac ah oo loo geystay dad rayid ah.
“27-ka bisha June 2021 ayaa burcad wadata Mooto Bajaaj waxa ay soona tarabuun dhac ugu geysteen Muwaadin Soomaaliyeed, muwaadinka waxa uu ashtakadiisa ku soo gudbisaday Nambarka gaaban ee ay ciidanka boolisku isticmaalaan ee 991, waxaana ay ciidanka booliska oo howlgallo sameeyay ay durba gacanta ku soo dhigeen burcaddii iyo caddeymihii ay wateen”. Ayuu yiri Afhayeenka ciidanka booliska.
Afhayeenka ayaa hadalkiisa ku daray “29-ka June burcad kale ayaa waxa ay dhac ugu geysteen qof muwaadin ah Irridda Isbitaal Shaafi ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo muwaadinkii dhac loogu geystay uu ashtakadiisa ku soo gudbistay nambarka gaaban ee 991, isla markaana ay ciidanka gacanta ku soo dhigeen eedeysanihii, mooto Bajaajtii uu watay iyo caddeymihii uu qaatay, shalay labo dhallinyaro ah oo ku hubeysan bastoolad, waxa ay dhac u geysteen Carwo lagu gado Moobeelada oo la yiraado carwo Kaah, kuwaasi oo goobta ka qaatay 19 teleefon oo 15 ka mid ah ay yihiin iPhone, iskaashi dhex maray booliska iyo shacabka, lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo mid ka mid ah eedeysana oo ahaa kii dhibanaha ku qabtay Bustooladda, halka kan kalena lagu raadjoogo oo saacadaha soo aadan gacanta lagu soo dhigi doono”.
Afhayeenka ciidanka booliska ayaa xusay in burcad maanta dhac ka geysatay maqaayada Ceynu Shamsi ee ku taala Isgoyska Al-baraka lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo, isagoo intaa ku daray in dhamaan eedeysanayaasha lagu soo qabtay falalka burcadnimada loo gudbin doono hay’adaha garsoorka si loo marsiiyo sharciga, isla markaana muwaadiniinta hantida laga dhacay ay u soo doonaan Saldhigga laga diiwaangeliyay marka uu xakunka kiiska dhaco.